Dowladda Russia ayaa laga yaabaa in Saldhig Ciidan ay ku Samaysato Soomaaliya. - Awdinle Online
Dowladda Russia ayaa laga yaabaa in Saldhig Ciidan ay ku Samaysato Soomaaliya.
January 31, 2020 (Awdinle Online) – Dowladda Russia ayaa si xoogleh u dooneysa in ay magaalada Berbera ee waqooyiga Soomaaliya u noqoto saldhig ciidan oo ay qorsheyneyso in ay ka sameysato Geeska Afrika, waxaa sidaas laga soo xigtay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka.
Xeebta magaaladda Berbera ayaa aad ugu dhow xeebta Jabuuti iyo gacanka badda cas oo ay ku yaalaa, saldhigyo ciidan ay ku leeyihiin Mareykanka iyo Shiinaha, waana taas sababta la rumeysan yahay in Russia ay u daneynaayo.
Dowladda Russia ayaa sidoo kale muujisay inay daneyneyso in ay xarun qaabilsan adeegga ciidamada cirka ka sameysato dalka Eritrea, hase yeeshee weli ma cadda halka ay marayaan wada-hadalladaas, sida uu qoray wargeyska New York Times.
Maamulka Somaliland oo maamusha Berbera ma ahan dal madax banaan, waxayna ka tirsan tahay Soomaaliya, mana cadda sida Russia ay saldhiggaas u sameyn doonto, ayada oo aan soo marin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Horey waxaa Berbera saldhig ciidan in ay ka sameystaan isugu dayey Imaaraadka Carabta, taasi oo dowladda Soomaaliya ay ka hor-timid.
Russia ayaa saameyn xooggan ku lahayd Africa intii uu socday xifaaltanka dalalka Bari iyo kuwa Galbeed ee dagaalkii qabow, hase yeeshee Russia ayaa isaga tagtay Africa wixii ka dambeeyey markii looga adkaaday dagaalkii qaboobaa ee 1991-kii markaasi oo uu burburay Midowga Soviet
Previous articleAfrican Union Assures Somalia of Support Amid Ongoing Drawdown of Troops
Next articleRussia to build military base in Somalia